भाग बण्डाले विग्रिएको कांग्रेस मेरो नेतृत्वमा एक हुन्छः डा.शेखर – खबर खुराक
Home > राजनीति > भाग बण्डाले विग्रिएको कांग्रेस मेरो नेतृत्वमा एक हुन्छः डा.शेखर
भाग बण्डाले विग्रिएको कांग्रेस मेरो नेतृत्वमा एक हुन्छः डा.शेखर
२५ मंसिर २०७६, बुधबार ११:५२
नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले सभापति शेरबाहादुर देउवाको पार्टी सञ्चालनमा भाती नपुग्नु र भागबण्डा बढी हुनले नेपाली कांग्रेस विग्रिएको बताउनुभएको छ । उहाँले ६० र ४० आँकडा पार्टीमा देखिनु र जुन सुकै विषयमा पनि भागबण्डा मात्र खोज्ने प्रबृति शीर्ष नेताहरुमा देखिनुले कांग्रेसको यो हविगत भएको दावी गर्नुभएको छ ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कसंग कुरागर्दै डा. कोइराललाले आगामी महाधिबेशनमा कार्यकर्ताले चाहे आफुले नेतृत्व लिन सक्ने र पार्टी लाई सहज रुपम एक ढिक्का बनाएर भागबण्डाको रानीतिको अन्त्य गराउने दावी गर्नुभयो । उहाँले पार्टी सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सिंगो कांग्रेस कहिल्यै नदेखेको टिप्पणी गर्दै पार्टीमा तेरो उति र मेरो यतिमै पार्टीलाई सिमित बनाए कम्जोर बनाएको आरोप लगाउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराललाले पार्टी भागबण्डाले विग्रिएको बताउनुभएको छ । उहाँले आपुले सिंगो कांग्रेसलाई एक बनाएर लान सक्कने क्षमता राख्ने बताउनुभयो । उहाँले सभापति देउवाले अहिले सम्म पार्टीको विभाग बनाउन नसकेकेको भातृ संगठनहरु लथालिंग बनाएको बताउनुभयो ।
उहाँले पार्टी सभापति जस्तो मन्छेले सवैलाई समान व्यवहार देखाउदै पार्टीका विभागहरु धमाधम गठन गर्नुपर्नेमा सवैसंग तिम्रा मान्छेहरुको नाम देउ भन्दै हिड्नु दुखत भएको बताउनुभयो । कोइराललाले सभापतिले आफु एक्लैले यस्ता विषयमा मनन गर्नुपर्ने बताउदै अहिले ४५ विभाग बनाउन खोज्नुको कुनै कारण नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले पार्टीमा भएका २८ वटा विभागलाई व्यवस्थित बनाउनुको सट्टा २८ बाट ४५ विभाग बनाउनेतिर सभापति लाग्नु दुखद भएको बताउनुभयो । समय बढाउदा पनि महाधिबेशनको मिति नजिएको तर, अहिले सम्म सभापतिले महाधिबेशनको तयारी थाल्ने भन्दा गुटलाई नै अगाडी बढाउन खोजिरहेको काइरालाको भनाइ छ ।
उहाँले उपनिर्वाचनले भोट बढ्नुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले चितवनको नतिजाले प्रचण्डलाई स्थानीय निर्वाचान आउदैछ भन्ने चेतावनी दिएको र चीतवनमा रेणुले नेपाली कांग्रेसकै मतले जितिेको पुष्टि गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले सीमा विवादका विषयमा प्रक्रिय अघि बढाउन भाती नपुर्याएको भन्दै भएका सवै प्रमाणहरुलाई अगाडी राखेर सीमा विवादका विषयमा राजनीतिक, कुटनीतिक र अरु हिसालले वार्ताको तयारी हुन नसकेको बताउनुभयो । सीमा विवादको समाधानका लागि दुवै देशले सचिव स्तरिय , सीमा र जलस्रोत विज्ञहरु स्तरिय टोली बनाएर बार्ता थाल्नु पर्ने र त्यसको परिणाम अनुसार राजनीतिक टोली बनाउनु पर्ने कोइरालाको भनाइ छ ।
उहाँले प्रधानमन्त्री टु प्रधानमन्त्रीको बार्ताले मात्रै पनि सीमा समस्या हला नहुने भन्दै राजनीतिक बर्ता विज्ञहरुले काम सकपछि मात्रै राम्रो हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कोइरालाले डिप्लोप्याटिक रुपमा जानुबाहेक अरु विकल्प नभएको बताउनुभयो । भारतमा पनि अरुणन्चल प्रदेश चीनले आफ्ने भनिरहेको उदाहरण दिदै यस्ता विवाद सवै मुलुकमा आउने र सवैले कुटनीतिक समाधान नै खोजेको बताउनुभयो ।
कालापानमिा २०१८ सालदेखि भारतीय सेना बसिरहेकाले आर्मी टु आर्मी पनि नेपाल भारत बर्ता हुनुपर्ने बताउदै कोइरालाले यी सवै विषयहरुलाई अगाडी नबढाएसम्म प्रधानमन्त्री बोलेर मात्रै नहुने बबताउनुभयो । भारतसं खुल्ला सीमा भएकाले धरै समस्या भएको तर, चीनसंग खुल्ला सीमा नभए पनि सीमा मिचिएको उहाँको भनाइ थियो ।
प्रकाशित मिति: २५ मंसिर २०७६, बुधबार ११:५२
Previous: महिनावारी, हामी सबैको जिम्मेवारी
Next: चुरोट सेवन गर्ने महिलाहरुलाई हुने १० खतरा